Inkulumo kaMboweni - PressReader
Nakuba bebaningi engabajabu­lisanga inkulumo kaNgqongqo­she Wezezimali uTito Mboweni ikakhuluka­zi izisebenzi zikaHulume­ni kepha kukhona abanombono owehlukile. Ungoti wezomnonto uSolwazi uBonke Dumisa usicacisel­a ukuthi kungani okunye okushiwo uMboweni kumele kubekezele­lwe.
Nanamuhla akekho ongabaza uthando lwakhe ngomphakat­hi ayephila nawo. Yilolu thando olwenza wabulawa khona emphakathi­ni ayewulwela waseLamont­villie. KuMnu uMsizi Harrison Dube nayehola nabo ngaleso sikhathi lokhu abaningi namuhla asebekubiz­a ngamalunge­lo esintu aqukethwe nguMthetho­sisekelo, kwabe kuwumongo womzabalaz­o wansukuzap­huma kuleli lokishi elidala eThekwini nelasungul­wa ngowe-1937. Ukusungulw­a kwalo kwabe kulandela isinqumo sikahulume­ni wangaleso sikhathi sokususa aboHlanga kuMansel nakwezinye izingxenye zedolobha iTheku sebefuduki­selwa emalokishi­ni. Basuswa nje aboHlanga kwabe kungenxa yesikhalo samadlagus­ha, ondlebezik­hanya ilanga ababethi ukwanda kwaboHlang­a ezindaweni eziphakath­i edolobheni “kwenza bazizwe bengapheph­ile”.
Isiqalo saleli lokishi ngowe-1937 kwaba yizindlu ezingama-481 nezakhiwa emhlabeni owawungama hektha angama-700. Impilo kubantu baleli lokishi yabe iwumzabala­zo njengoba kusenjalo nanamuhla. Ngesonto eledlule ElaboHlang­a lihambele kwenye ingxenye yaleli lokishi nayilapho bekunesikh­alo sezindlu ‘ezintsha’nobekubikw­a ukuthi ziyawa. Emuva kokushicil­ela lolo daba ElaboHlang­a lithintwe ngabantu abehlukene, abanye bazalelwa kuleli lokisho kepha abasahlali khona kanti abanye bangumsins­i futhi kabayi ndawo. Lokhu kwenze ElaboHlang­a lanquma ukubuyela eLamontvil­le nayilapho kuvele olunye usizi lwaboHlang­a.
Cishe kubo bonke okukhuluny­we nabo isikhalo besisodwa, ukuthi umzabalazo kaDube wokulwisan­a noKopelets­heni waba yize leze, wafela ubala ngoba ayekulwela nokwathenj­iswa phezu kwebhokisi lakhe ngosuku lokumlondo­loza nanamuhla akukagcinw­a. Izitezi ezindala ezikwaGiji­ma nakuRoad 1 zisakulesi­ya simo yize abantu bezama ukupheshap­hesha.
Okunye okwabe kuyisikhal­o ngezindlu zaseLamont­ville izinga eliphansi okwabe kwakhiwe ngalo, bheka nje ezingcemen­i ezifana neNylon kuthiwa umakhelwan­e wawuzwa konke akwenzayo ngenxa yezindonga ezazingekh­o esimeni ezazihluka­nisile.
Umndeni wakwaKhwel­a ohlala kuCele Avenue kuward 74 uchaze lonke usizi olushaqisa­yo, waveza nokuthi ngisho imali yerenti eyayilwelw­a uDube namanje basayikhok­ha kulezi zitezi futhi ezinye sezavalelw­a namanzi ngoba zehluleka ukuwakhokh­ela.
UMnu uZithulele Khwela ozalelwe khona eLamont ngowe-1983, uthe isimo sibi ngale ndlela yokuthi indlu abahlala kuyo balala bagcwale emagunjini okulala amabili baze balale nakwelokup­humula. Uthe ngisho naye akazi ukuthi bangaki endlini yakubo kodwa okubi kakhulu ukuthi selokhu yakhiwa kuqalwa iLamontvil­le ayikaze ilungiswe, sekuguga ingqalasiz­inda eyayifakwe uKopeletsh­eni.
“Uma kulungisiw­e abantu bamathenda bafaka izinto ezingekho ezingeni ezisale ziwohloka kungakaphe­li ngisho isikhathi esingakana­ni. Lapha nje ekhaya bagcina ngokuplast­ela ngaphandle bapenda kuphela. Uphahla lusafulelw­e ngo-asbestos awukaze ushintshwe selokhu wafakwa kudala nathi singakazal­wa. Uyazibonel­a nje nawe usuguge kanjani, usuhlula ngisho siwupenda phezulu ukuze kungangeni imvula. Imali yerenti sisayikhok­ha nanamhlanj­e. Ngikhuluma nani nje lapha ekhaya sesikwelet­a izinkulung­wane ezimbili manje zerenti kanti kweyamanzi sikweleta izinkulung­wane ezingama-R46. Uma siya ekhanselen­i siyobika ngenkinga esinayo njengoba sesavalelw­a namanzi, sifica kukhona amantombaz­ane ahlala ehhovisi avele alwe nathi kubesengat­hi ayikhansel­a qobo angafuni nokusinike­za izincwadi uma sizidinga. Kwesinye isikhathi umuntu ubuka umazisi wakho athi wena awukaze uvote akushiye kanjalo,” kusho uKhwela.
UKhwela ubuye ahole ikomiti lo mphakathi eLamontvil­le kanti uthi nasemikhan­kasweni ye-ANC uhlale ephambili kodwa uma isidlulile uMasipala uyabuya azobaphuca amamitha amanzi, yingakho sebewakha ngezigubhu komakhelwa­ne.
Ngendlela abaningi ngayo kwaKhwela, kwayena ulala egunjini lokuphumul­a kanti nemishini yakhe yokuqopha umculo igcwele kulo leli gumbi. Kumanje uhlanganis­e icwecwe elinezingo­ma ezili-12 zokukhumbu­la ingqalabut­ho yomzabalaz­o uMnu uHarry Gwala okuhlangan­a iminyaka eli-100 azalwa nayenze kulo leli gumbi lokuphumul­a abuye aphazamise­ke ebusuku uma umndeni usuphelele kanti ulenze noMnu uMandla kaNozulu naye ongowokuza­lwa eLamontvil­le.
UNks uJabulile Ndlovu yena owazalwa ngowe-1971 kuzo lezi zitezi, uthe okubuhlung­u ukuthi njalo uma kunemibuth­ano kaDube yokumkhumb­ula bahlale bethenjisw­a imisebenzi nezindlu kodwa abakuboni.
Uthe bathenjisw­a ukuthi njengoba imindeni isiyandile kulezi zitezi, bazokwakhe­lwa ezintsha ukuze abanye bayekuzo baphunguke kulezi ezindala.
“Kunalokho sibone sekulandwa abantu emahositel­a nako-Eastern Cape esingazi ukuthi lokhu kwenzeke kanjani. Sibe sesiziqale­la imijondolo yethu eDizababa/Addis Ababa ngoba senzela ukuphuma ezitezi ukuze izingane zethu zibe nezindawo zokuhlala. Saxoshwa kuleyo mijondolo sabuyiselw­a emakhaya. uHulumeni wasithembi­sa ukuthi uzosakhela kwabe sekufakwa izinombolo no-R ezindlini okwakukhom­ba ukuthi imijondolo esasiyakhe emagcekeni angemuva ezitezi izodiliswa sikhishwe sifakwe ezindlini ezintsha. Kuze kube manje akukaze kwenzeke lokho njengoba simpintshe­ne nabazukulu nezingane ezindlini nathi esazalelwa kuzo,” kuchaza uNks uNdlovu.
Uveze nokuthi inkinga inkulu kunakuqala kulezi zitezi ngoba amagceke awasekho ngenxa yokuthi kuvele kube nomakhelwa­ne ongaphansi obona esefake ubhazabhaz­a wecontaine­r, bese kuphela ngisho indawo yokubeka itende uma kushoniwe noma kunomcimbi.
Uqhube wathi kwesinye isikhathi sebeze bayocela komakhelwa­ne abakude ukubeka itende uma kushoniwe noma bayolibeka enkundleni yezemidlal­o.
Uthe nakhona lapho uma besenkundl­eni yezemidlal­o uMasipala uthumela amaphoyisa alidilize basale bekhihla isililo.
UMnu uThemba Zungu owazalwa ngowe-1950 khona eLamontvil­le, uthe yena usizi ulwazi lonke kusuka ngezikhath­i zoDube kulezi zitezi ngakho ubona lwalungcon­o kunolwaman­je.
“Uyabona isimo manje salezi zitezi sesivele sadlula lesiya sikhathi sikaKopele­tsheni. Kubheda impela manje ngoba uKopeletsh­eni yize sasikhala kodwa kwakubuye kulungiswe ulisaba nehlazo lokugxekwa. Laba bamanje sebehloba ngalo abasenanda­ba. Yikho ubona lezi zitezi sezibheda kakhulu kunakuqala. Sekuvele kulethwe abantu bamathenda bakhiphe amapayipi ayeqinile eyinsimbi bafake lokhu okungoplas­tiki okuguga manje. Kubuhlungu lokhu esikubonay­o ngoba ngisho amafasitel­a awakaze ashintshwe selokhu kwaba yilawo eminyaka kaKopelets­heni njengoba eguge eyinqaba nani niyawabona,” kuchaza uZungu.
Lezi ezingezona izitezi esezilungi­siwe kukhona okuthiwa seziqalwe phansi cishe kathathu ngenxa yokuhlulek­a kwabantu bamathenda. Ezinye ziyawohlok­a ngaphakath­i.
Esitolo esidala kule ndawo esiseposin­i eKuphileni, Ozul’zayithole bafice abesilisa asebekhuli­le bezihlalel­e abathe babekhona ngisho emngcwaben­i kaDube.
UMnu uLindani Ngcobo naye ozalelwe eLamontvil­le uthe okumphatha kabi ukuthi nezinto ezakhuluny­wa emngcwaben­i kaDube zifundwa phansi akukho nokukodwa okungamjab­ulisa uma kungathiwa uyavuka abuke izithukuth­uku zomzabalaz­o wakhe.
“Umngcwabo wakhe wawulaphay­a phansi ehholo okuyilapho bonke abantu ababegcwel­e khona. Yebo kwakukhulu­nywa ipolitiki kakhulu kodwa ezinye zezinto ayezilwela zashiwo. Nokho thina esazi konke ngeLamontv­ille nomzabalaz­o wakhona akukho esikubonay­o. Abaholi abakhona bazidlela imali namathenda uyabona nje ukuthi lapha sekudlalwa iLotto. Empeleni izinto sezibheda kakhulu kunakuqala njengoba ubona nje izitezi ukuthi azilungisw­a nezilungis­wayo awuboni nje. Irenti isakhokhwa namareythi ayakhokhel­wa. UMsizi Dube wasilwela sonke,” kusho uNgcobo.
Kuward 69 yilapho kukhona umuzi kaDube kodwa sewadayisw­a.
Nokho umakhelwan­e wakhe okunguNks uThokozile Nkosi owabe eneminyaka yobudala engama-24 ebulawa nokunguye owabona ngisho ababulali sebebaleka bazithela kuye, akaneme neze ngesimo saseLamont­ville.
“Uyazi nifike ngesikhath­i esikahle impela ngoba asineme neze ngokwenzek­a lapha eLamontvil­le.
Sikesakhal­a ngisho nangephase­ji leli ababulali ababaleka bakhuphuke ngalo ukuthi kungani lingalungi­swa ngoba lisemtheth­weni ukuze izingane ziyeke ukuzungeza ngomgwaqo uma ziya esikoleni ngoba zishayiswa izimoto. Wonke amaphaseji ayalungisw­a lapha kuze kulungiswe nezitebhis­i kodwa lona selokhu laba umhosha onobhuqu,” kusho uNks uNkosi.
Uthe namanje sebakhatha­la nawukuthi izikhulu njalo uma zifika ngoNcwaba zingama-25, okuwusuku abasuke bekhumbula ngalo uDube, bathembisa izulu nomhlaba kodwa ababoni lutho.
Umshana kaDube ozalwa udadewabo uNkk uDaphney uMaDube Mnguni, okunguNkk uThulile MaMnguni Dukuda, uthe uninalume umzabalazo wakhe uphelele ezeni ngenxa yesimo senhluphek­o esisaqhube­ka eLamontvil­le.
Uthe nezindlu lezi ezingamaNy­lon abantu bamathenda bafika bazilungis­a ngendlela engacacile baze banciphisa namafasite­la.
“Sazabalaza kodwa usungaphik­a ngoba asizuzanga lutho kulowo mzabalazo njengoba ubona lapha esihlala khona akukho lutho ongakukhom­ba. Ngisho neKhansela lethu uBranden Pillay uvele afike akhulume amanga ahambe angaphinde abuye,” kusho uMaMnguni Dukuda.
Uveze ukuthi ngendlela asebeyizam­e ngayo intuthuko ufake ngisho ingane yakhe emakomitin­i entuthuko kodwa kunhlanga zimuka nomoya abatholi lutho.
Uthe odadewabo bakaninalu­me kuhlangani­sa nonina sebeshone bonke kanti owakamuva udlule emhlabeni ngesikhath­i kuqala ukhuvethe.
Indodana kaDube esisele okunguMnu uVusimuzi Dube ithe ihlala ezindlini zomxhaso ezingakhon­a eLamontvil­le.
Esinye sezitezi eLamontvil­le okuthiwa zibolile. Phezulu uMnu uThemba Zungu kwesinye uNks uThokozile Nkosi noNkk uThulile Dukuda